त्यो रुपा (मनोवाद यौन कथा) | जिन्दगीको पानाहरु
बिमल कुमार, यस्तै ३६,३७ बर्षको बिबाहित पुरुष हो, ऊ काठमाडौँको एक प्रतिष्ठित कम्पनीमा जागिर खाईरहेको छ । उसको कम्पनीमा पनि ऊ निकै इमान्दार अनि मेहनेती अनि अलि गम्भीर स्वभाबको मान्छे भनेर चिनिएको छ । सधै अफिसमा कामको चपेटा अनि हाकिमको थोर बहुत गालि र अफिस कै साथीहरूले काममा डाहा गरेको देखेर ऊ निराश हुन्छ कहिले कही । एकतिर कामको टेन्सन त्यसमाथि सँगै काम गर्ने साथीहरूले इर्श्याले गर्दा झन नराम्रो अनुभव गर्छ बिमल कुमारले । उसको श्रीमती घरमा नै बस्छे। यस्तै ऊभन्दा २ बर्ष कान्छी होलिन श्रीमानभन्दा, तरुनी उमेरमा निकै राम्री थिइन, तर घरमा नै बसेर होला अहिले अलि निकै मोटी भएकी छिन र शरीरको त्यति ख्याल गर्दीनन् । एउटा छोरालाई हेरविचार अनि स्कूल पठाउने अनि घरको सबै कामहरू तिनी सम्हाल्छिन ।
बिमल कुमार आज अलि थाकेको महसुस गर्दै ५ बजे तिर घर फर्कियो, घरमा श्रीमती छोरा साँझको तरकारी किन्न तलतिरको अलि टाढा पसलमा गएका रहेछन । ऊ खुइय्य गर्दै कोठामा पसेर सोफामा बस्न पुग्छ, थाकेकोले होला केही बेर सोफामा शरीर छोडी दिन्छ ।
बिमल कुमारको अनुहारमा चमक छ आज, ऊ त्यो पल्लो घरको भाडामा बस्ने भिम नारायणको छोरी रुपासँग न्युरोडतिर हिड्दैछ, रुपा ११ क्लासमा पढ्दै छिन, तिनी गोरी अनि निकै राम्री छिन साथै पढाईमा पनि ठिक ठिकै छे । रुपा निकै चुलबुले अनि कुनै पनि केटाहरूलाई आकर्षित गर्न सक्ने खालकी केटी हुन्, तिनको बोल्ने हाउभाउ अनि आँखाको नजर त्यस्तै छ, जो कोही पनि एक पटक रुपासँग बोल्न हिड्न पाएमा तरंगित हुने गर्छ, मतलब रुपामा यौन आकर्षण छ ।
बिमल कुमार र रुपा न्युरोडकै एक रेस्टुराँमा पस्छन, रुपाले मिनी स्कर्ट त्यस माथि अलि पातलो खालको सेतो शर्ट लगाएकी छे, कलेज ड्रेसमा नै छे । घरीघरी बोल्ने हास्ने क्रममा तिनको पुष्ठ नितम्बको आकृति शर्टमा देखिने गर्छ, यो बेला बिमल कुमार केही अप्ठ्यारो महसुस गरे जस्तो गरी लुकेर हेर्ने गर्छ । रुपाको मिनी स्कर्ट पनि अलि छोटो भएकोले न्युरोड बाटोमा आउँदादेखि नै बिमल कुमारले अलि अलि तिघ्रा हेर्दै थियो तर धित मरेको थिएन ।
बिमल दाइ “मलाई के खुवाउने आज?” त्यसै त बिद्यार्थी जीवन, सधै पैसाको खाचो, रुपा आज खुशी छे त्यही माथि अफिस गर्ने बिमल दाइले रेस्टुराँमा खुवाउन लगे पछि । “अनि के खान्छौ तिमी जे जे मन पर्छ अर्डर गर न” बिमल कुमार रुपालाई आस्वस्त पर्दै भन्छ । ऊ निकै रोमान्चित भएको छ रुपालाई आफ्नो नजिक पाएकोमा, साएद उसको युवा उमेरमा यस्तो अनुभव लिन पाएन होला त्यसैले । हुन पनि त्यो बेला बिमल कुमार पढाई बाहेक अरु कुरा सोच्ने गरेन, भनौ उसको साथी सँगी त्यस्ता थिएनन र वातावरण नै बनेन । अर्को कुरा घरमा बुवाको अनुशासित भएर हिडडुल गर्नु भन्ने निकै कडा नियमले गर्दा त्यो सम्भब नै भएन बिमल कुमारको लागि ।
रुपाले बफ म:म अनि एउटा कोक अर्डर गरी र बिमलले थुक्पा साथै कोक नै अर्डर गरे,”अनि रुपा तिम्रो पढाई के कस्तो हुदै छ?” कुराकानीलाई अगाडी बढाउने क्रममा बिमलले सोध्यो, “के हुनु दाइ, यस्तै हो कलेज गयो आयो खोइ किन हो, त्यति पढाईमा मनै जादैन” । हुन पनि त्यो १७ बर्षको टिन एज, काठमाडौँ जस्तो रमझम भएको सहरमा राम्रो कपडा लगाऊ, मिठो खाउ, मोज गरौ भावना हुनु स्वाभाविक थियो रुपालाई । फेरी तिनको घरको स्थिति पनि खासै राम्रो छैन बडो मुस्किलले रुपाको पढाई खर्च धान्दै छ तिनको बुवाले । ” हेर ! रुपा हामी मानिसले पढ्नु पर्छ, भोलि केही सुख पाउनलाई दुख त हुन्छ नै शुरुमा, आतिनु हुदैन है” भन्दै सम्झाउन खोज्छ । “आ बिमल दाइ पनि, म कहा आतिएको छु र …के गर्नु आफुलाई यहा साथीहरूसँग हिड्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ, साथीहरू हरेक महिना नयाँ लुगा लगाउछन, आफु भने यस्तै हो, भनेको लुगा लगाउन पाए त म राम्ररी पढी हाल्छु नि” । एकै पटकमा त्यो लामो कुरा गरी रुपाले, त्यतिकै कोक ल्याई दिए साहुजीले, बिमल कुमारले ल कोक पिउ है भन्दै, एक चुस्की लगाए उनी आफैले पनि ।
रेस्टुराँमा टेबल अनि कुर्सी साँघुरो थियो, रुपाले त्यहा कुर्सीमा गोडा अलिकति फाटेर बसेकी थिइन, अचानक बिमलले रुपाको घुडा माथिको चिल्लो तिघ्रा नियाल्न पुग्यो, उसलाई रोमान्चित बनायो । फेरी हेर्ने मनशाय त थियो तर लुकी लुकी हेर्नु एक त दाइको नाताले अप्ठ्यारो थियो, तापनि छोरा मान्छे न हो त्यसै पुरुष बर्गमा नै पर्यो बिमल कुमार, संसारमा यौनमा कोही पनि प्राणी अछुतो छैनन् । यही बीचमा म:म र थुक्पा पनि ल्याई दिए साहुजीले, अझै पुगेन भने फेरी पनि मगाउ है भन्दै बिमल कुमारले खान शुरु गरे ।
थुक्पा खादै पनि बिमल कुमार घरिघरि रुपाको बक्षस्थल नियाल्दै थियो, हुन पनि रुपाको नितम्ब निकै ठाडो ठाडो थियो । र यो उमेरमा अहिलेका टिन एजका केटीहरू पनि केटाहरू आफुतिर आकर्षित होस् भनेर अलि खुला शर्ट या टाइट टि शर्ट लगाएर हिडेको सबैलाई सर्बविदित नै छ । यसमा रुपा पनि के कम, राम्री देखिनु अनि केटाहरूले ‘हाइ सेक्सी’ भनेको मन पर्न थालेको थियो तिनलाई, बाहिर रिसाए जस्तो गरे पनि भित्र मनमनमा खुशी भएको आभाष पाइन्छ नै । बिमल कुमार पनि के कम, रुपासँग कुनै नजिकको नाता सम्बन्ध थिएन, यदि रुपाले चाहेमा उनीहरू बीच यौन सम्बन्ध हुन पनि कुनै बाधा हुँदैनथ्यो । तर ऊ बिबाहित अनि ५ बर्षे छोराको बाउ थियो, तर पनि आज किन किन ऊ रुपालाई पाएर खुब रमाई रहेको छ । मानौ भर्खर उमेरकी रुपालाई पाएर अर्कै संसारमा बिमल कुमार रोमान्चित भैरहेकोछ, लाग्छ भर्खर मायाप्रीति गाँस्दै छ रुपासँग ।
अनि दुई जनाले म:म अनि थुक्पा खाइसके अनि बिमल कुमारले भन्यो “रुपा आज बिस्वज्योति हलमा रोमान्टिक हिरो शाहरूख खानको “दिल तो पागल हाइ” चलिरहेको छ, हेर्न जाने हो?” रुपाले यसो टाउको कन्याएर भनिन ” बिमल दाइ म सँग पैसा नै छैन अनि” । ” रुपा तिमी चिन्ता नगर, म तिरिहाल्छु नि” भन्दै बिमलले आफ्नो पैसा कमाएको पुरुषत्व देखायो, ल ल दाइले भने पछि म त तयार छु रुपा फुरुंग भइन । दुई जना न्युरोड रेस्टुराँबाट निक्लेर बिमल कुमारको मोटर साइकलमा विस्वज्योति सिनेमा हल आइ पुगे । अनि बाल्कोनीको टिकेट काटेर भित्र पसे। फिलिम शुरु हुन लागेको थियो, रुपा बिमल कुमारको पछि पछि हिड्दै थिइन, अनि दुवै जना सिटमा बसे ।
फिलिम शुरु भयो, शाहरूख खान देखे पछि त्यसै त रुपा, उसको फ्यान झन खुशी भइन । हल भित्र अध्यारो थियो घरीघरी पर्दामा फिलिमको लाईटले अलि अलि उज्यालो देखिन्थ्यो हलमा, यस्तैमा रुपा बिमल कुमारसँग कुम जुधाएर बसिन् । आखिर मानिसको मन न हो, माया भन्ने कुरा धेर थोर हुन्छ नै समिपमा भए पछि । बिमल कुमार पनि रुपाको कुममा हात फैलाएर राख्यो, मतलब उसले पनि माया दर्शायो रुपामाथि, रुपा अलि तरंगित भइन, साएद पुरुषत्वको स्पर्श नै यस्तै हो ।
बिस्तारै फिलिम हेर्ने क्रममा बिमल कुमारले रुपाको हात समाते, अनि हातमा छोटो किस गरे, रुपा चुपचाप बसिन् साएद रुपालाई पनि मिठो अनुभूति भयो होला । अब बिमल कुमारको आँट आयो रुपाले केही नकारात्मक कुरा नगर्ने रहेछ भनेर अनि उसले बिस्तारै रुपालाई त्यही बसेको सिटमा नै अंगालोमा बाध्यो अनि उसले भन्यो ” आइ लभ यु रुपा, आइ लभ यु सो मच” ।
“के रे कसलाई आइ लभ यु हरे…..पागल भयौ कि क्या हो?” भन्दै बिमल कुमारलाई झकझक्याइन उसकी श्रीमतीले। बिमल कुमार यसो सम्हालिए आफै, त्यही सोफामा कुशन सिरानीलाई अँगालो मारेर सपनामा अर्धनिद्रामा बर्बाराएका रहेछन।
“धत् ! क्या मिठो सपना भताभुंग भयो,” हाँस्दै बिमल कुमार अफिसको पोसाक फुकाल्न थाले ।
स्रोत : मझेरी डट कम
Filed under: मनोवाद | Tagged: मनोवाद |
« आरुषी हत्याकाण्डको नेपाली हेमराज निर्दोष कट्टुमा अन्जु ! »
prem ballabh pandey, on जुन 4, 2011 at 6:06 अपराह्न said:
नितम्बत हिपलाई भन्छननि ! स्तन या दूध लाई किन नितम्ब भन्या होला ?